Ukudla okwehlisa i-Lipid > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukudla okwehlisa i-lipid-okwehlayo
Ukudla okwehlisa i-lipid uhlelo lokudla okunempilo okwenzelwe ukugwema ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate asheshayo, kanye nosawoti onqunyelwe. Ukudla okunjalo kufanelekile kubantu abanokuphazamiseka kokujikeleza, izifo zesibindi, izinso, uhlelo lwenhliziyo. Inconyelwe i-cholesterol ephezulu. Ukugcina ukudla kulula, kubalulekile ukunamathela emithethweni yokudla bese ukhetha izindlela zokupheka ezifanelekileyo zokudla.
Imbangela ye-hypercholesterolemia imvamisa ukungondleki, futhi imvamisa futhi imithambo eyeqile yokuphila ngokweqile. Akuzona zonke izinkinga ezingasombululwa ngokushintsha isistimu nokudla, kepha ukudla okwehlisa i-lipid kuzosiza:
thuthukisa inhlala-kahle jikelele,
ukunciphisa amathuba okuba nesifo senhliziyo, kubandakanya
ukunciphisa ekudleni kokudla okuqukethe amafutha.
Kuhloswe ngayo ukwenze i-lipid metabolism ifakwe, kufaka phakathi isibalo sokudla okudliwayo kanye nohlelo lokudla.
Imithetho eyisisekelo yokudla kokudla: izeluleko namacebo
Okushiwo yilolu hlelo lokudla okunempilo ukuthi ungasusi ngokuphelele amafutha agcwele ekudleni (futhi ayingozi). Umsoco kufanele unikeze umzimba zonke izinto ezidingekayo.
Ukudla okujwayelekile okwehlisa i-lipid kufanele kuhambisane nale mithetho elandelayo yokudla okufanele:
Kubikezelwe umsoco oyimpilo, kuthatha ukudla okungu-3 okuphambili kanye nama-2 ukudla okulula.
Inciphisa amafutha ezilwane. Ngaphezu kweqiniso lokuthi ekuqaleni udinga ukuthenga inyama engenamafutha, udinga futhi ukusika amafutha abonakalayo kuyo.
Amasu wokupheka abalulekile. Musa ukuthambisa ngenani elikhulu lamafutha, e-batter, emafutheni ajulile. Imikhiqizo yokupheka, isitashi, ekuphekeni kancane noma ukubhaka kuhhavini.
Igunyaziwe ekudleni kwandise amaprotheni amasiko umsuka wemifino futhi ukhawulele okuqukethwe kwama-carbohydrate alula (amaswidi, ushukela).
Cishe abe-50% ukudliwa kwekhalori kufanele iwele ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi (Lokhu okusanhlamvu, amantongomane, izithelo, kepha hhayi amaswidi). Uma kungenzeka, faka ekudleni kwansuku zonke ukuhanjiswa okuningana okuningana (ngokuqondile, kuze kufike ku-500 g) yemifino eluhlaza nezithelo, ingxenye ye-oat, i-buckwheat noma iphalishi yelayisi (200 g) nesinkwa esingama-300 g esiphelele. Lokhu kuzonikeza i-fiber yomzimba, ngaphandle kwawo umsebenzi ojwayelekile wamathumbu akunakwenzeka.
Udinga usuku phuza amalitha amabili amanzi angahlanzekile ngaphandle kwegesi.
Akunakwenzeka ukwenqaba ngokuphelele amafutha.
Qiniseka ukuthi ufaka uwoyela wemifino ekudleni. Ngaphezu kweqiniso lokuthi amaqanda angumthombo wamaprotheni, kukhona imikhawulo ethile - kungadliwa kuphela ama-yolks ama-3 ngeviki ukugwema ukukhulisa i-cholesterol.
Izici Zokudla Kwabesifazane Nabesilisa
Ukudla kufanele kuhambisane nezindlela zokuphila, ziyehluka kwabesilisa nabesifazane. Ngasikhathi sinye, kunemigomo esetshenziswayo yokulondolozela isisindo, lapho ukudla kunqunyelwe ukwehlisa i-cholesterol kanye nama-lipids kuphela emzimbeni. Kepha uma umuntu futhi efuna ukwehlisa isisindo, kuzodingeka wengeze kakhulu amafutha nama-carbohydrate, kepha andise amaprotheni.
Ithebula elilandelayo lizokusiza ekutholeni umthamo wakho wamaprotheni.
Ukwehla kwesisindo 150 165 175
Ukuze ulondoloze isisindo 125 135 145
Kwabesifazane, amazinga wamaprotheni aphansi. Ngaphezu kwalokho, abesifazane mancane amathuba okuthola izicubu zemisipha okudingeka amaprotheni amaningi (uma ungadlali imidlalo yezemidlalo).
Uma ulandela ukudla okwehlisa i-lipid, kubalulekile ukubonana nodokotela - kwezinye izifo (ngokwesibonelo, nesifo sikashukela), ukwanda kwamaprotheni ekudleni kuyanconywa, kepha akubalulekile. Kepha ngesifo sezinso, kungahle kwehliswe.
Yikuphi ukudla okungadliwa ngokudla okwehlisa i-lipid
I-Shrimp, crayfish, caviar, inhlanzi ekheniwe, nenhlanzi ebhemayo.
Imikhiqizo yobisi enamafutha (ushizi wasekhishini, ukhilimu omuncu, ukhilimu).
Ukudla okunamafutha: iwundlu, ingulube, isikhumba senkukhu, inyama ye-goose, amadada.
Imikhiqizo yamakhekhe ebhaka eyenziwe ngofulawa kakolweni omhlophe, i-semolina, ilayisi elimhlophe ngokuvamile ayinqatshelwe, kepha ingadliwa kuphela ngamanani amancane noma ifakwe irayisi yasendle, i-pasta, amaswidi, amakhekhe khekhe, amakhekhe.
Ushokoledi, u-ayisikhilimu, ujamu, ujamu. Uju luvunyelwe, kepha hhayi ngaphezu kwe-1 ithisipuni njalo ezinsukwini ezi-2.
Ibhotela, uwoyela wokupheka, imajarini, isinqe.
I-Alcohol, ushukela omnandi nayo ivinjelwe.
Ungayenza kanjani imenyu eyisampula: zonke izinsuku, isonto
Ukuze uzimele upende imenyu yezinsuku eziyi-7, landela le mithetho engenhla. Futhi ukudla uqobo kuzobukeka okufana nalokhu:
Isidlo sasemini - isobho sethanga, ucezu lwenyama ebilisiwe, isaladi yemifino enamahlamvu ikhukhamba.
Isidlakela - ushizi wasekhishini (i-150 g), inkomishi yomhluzi we-rose yasendle.
Dinner - pilaf ngemifino ngaphandle kwenyama, ingilazi yejusi.
NGESONTO Ukudla kwasekuseni - ushizi we-cottage (150 g), i-rye toast, inkomishi yetiye elingafakiwe.
Isidlo sasekuseni sesibili isaladi ene-tofu (lokhu kuba yi-bean curd, umthombo wamaprotheni), ukwatapheya.
Isidlo sasemini - isobho lamatamatisi, ifuleti le-turkey, elibhakwe kuhhavini, usawoti we-apula osanda kufakwa.
Isidlakela - isaladi yamaGrikhi noshizi oluthambile neminqumo.
Ukudla kwakusihlwa - isaladi elinama-shrimps abilisiwe, eliphakathi kwe.
ISONTO Ukudla kwasekuseni - i-omelet enamatamatisi, kuphekwe kuhhavini, itiye le-ginger nelamula.
Isidlo sasemini - isaladi yezithelo noma yemifino ngeyogathi yemvelo.
Isidlo sasemini - i-borscht ethambile, lapho ungangeza khona ubhontshisi osobala noma oluhlaza, ujusi osanda kufakwa, noma imuphi imifino noma izithelo.
Ungadla - yisiphi izithelo ongakhetha kuzo.
Ukudla kwakusihlwa - i-pike perch, ebhakwe kuhhavini ngamatamatisi, afafazwe ngamantongomane.
Le menyu ilungele ukwehliswa kwesisindo futhi yehlise amazinga e-lipid, ngoba ifaka kuphela izitsha eziphansi zamakhalori futhi cishe azikho i-carbohydrate elula, ngoba noma imaphi amaswidi anqatshelwe, ngaphandle kwalapho ngezikhathi ezithile ungakhokha uju noma izithelo.
Ngokuvamile, lokhu kuhambelana netafula lokwelashwa No. 10, elikhonjelwa ukukhuluphala. Isisindo sibhekwa masonto onke.
Ukuntuleka kwama-carbohydrate alula ekuqaleni kunzima impela ukukubekezelela. Kepha ngokuvamile, izondlamzimba zingahluka. Ngokwengqondo, ukudla okunjalo kungabekezeleleka kalula, kepha kusukela embonweni wokuphilwa komzimba kulinganiselwe ngokuphelele.
Amaresiphi wokudla kweviki
Ukufunda ukupheka ngokwemithetho yokudla okwehlisa i-lipid kuzoba lula uma ugcina uhlu lokudla okungavunyelwe emehlweni akho futhi ugcina ujwayelene nemithetho yokudla okufanele. Pheka inyama ngemifino, ubhake kuhhavini, umusi, ukwehlisa i-cholesterol.
Omelet ngemifino namakhowe
Okokuhambisa okungu-2 kuthathe:
2 tbsp. wezipuni kokhilimu omuncu onamafutha amancane,
I-100 g yama-championons,
Shaya amaqanda ngosawoti, engeza ukhilimu omuncu, uphinde ushaye. Sika kahle isipinashi kanye namakhowe amaningi bese uxuba namaqanda. Thela inqwaba esitsheni sokubhaka, upheke kuhhavini kuze kubanjwe i-omelet. Faka amakhowe asele, uthathe izingcezu bese ubhaka eminye imizuzu eyi-10. Fafaza u-anyanisi oluhlaza ngaphambi kokukhonza.
udali obomvu (250 g),
ama-clove ambalwa kagalikhi
2 tbsp uwoyela wemifino,
amakhambi nezinongo ukunambitha.
Thela i-lentel ngamanzi ngesilinganiso esingu-1: 2, faka umlilo upheke kuze kuphekwe. Utamatisi ogcotshwe ngamanzi abilayo, ikhasi, nquma uginindela. Hlikihla izaqathe ku-grater ehlanganayo, gcoba kancane u-anyanisi negalikhi epanini lokudonsa kawoyela. Lapho amaleyili esemi ngomumo, engeza utamatisi, izaqathe, u-anyanisi, i-garlic, izinongo bese upheka imizuzu eyi-10 kuze kuphekwe,
I-150 g isithombo
anyanisi owodwa omhlophe
I-100 g izaqathi, gazinga ku-grater yamaqhafu.
I-Celery petioles - izingcezu ezi-4 zinqunywe kwizingcezu ezinciphile, njengama-radishes.Qoba u-anyanisi fake. Endishini yesaladi, hlanganisa yonke imifino, inkathi nge-2 tbsp. nezinkezo zeyogathi yemvelo, uma uyifisa, fafaza imbewu ye-sesame.
Ukudla okwehlisa i-lipid akuyona nje inkathi yesikhathi esifushane lapho udinga ukudla kahle. Lolu uhlelo lonke olunamathelwa kuyo yonke impilo, ngesinye isikhathi ngokudipha okuncane.
Ukugwema amaphutha abulalayo, ama-cores, ama-diabetes, abantu abane-hypertension, ukudla okunciphisa i-lipid kuyimpoqo. Ukudla okunempilo kunika ubusha obude, ubungqabavu. Ngokudla, ukwehlisa i-cholesterol, edliwe ngumuntu, kuyadingeka. Izingxenye ezincane zokudla okuthandayo kwesinye isikhathi azizukulimaza, imvamisa ye-cholesterol nsuku zonke ingama-500 mg. Ukudayiswa akuvunyelwe:
omama abakhulelwe nabakhanyayo,
abantu abanezifo ezingamahlalakhona
ngokuntuleka kwe-calcium emzimbeni,
iziguli ezinesifo sikashukela
wonke umuntu ongaphansi kweminyaka eyi-18.
Izimiso Zokudla Kondla I-Cholesterol
Ukudla okwehlisa i-cholesterol kuhlinzeka ngokudla okufanele. Ungadli ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate nama-kilojoule. Kulula ukwehlisa i-cholesterol embi ngokulandela imithetho elula yokudla:
Awukwazi ukudla ukudla ngemuva kuka-7-8 pm.
Khulisa fiber yokudla.
Vimbela ngokuqinile ukudla okuthosiwe: ngenkathi udla, kungcono ukudla ukudla okubilisiwe, okubhakiwe ngaphandle kawoyela, izithasiselo eziyingozi noma ezinamafutha.
Phuza uketshezi oluningi oluhlanzekile (kusuka kumalitha ama-2).
Ukudla phakathi nosuku ngesikhathi sokwelashwa kufanele kube ngokuxutshwa: kungcono ukudla izikhathi ezingama-5-6, kepha ngezingxenye ezincane.
Izinga lekhalori, elingenakwedlula - 1200.
Sekela okudlayo ngokuzivocavoca umzimba.
Hyperlipoproteinemia - Lokhu kuyinkimbinkimbi yesibonakaliso, ehambisana nezinga eleqile le-lipids egazini. Ama-lipid ayizinto eziphilayo ezibandakanya umzimba, kanye namaprotheni nama-carbohydrate. Izakhi ze-lipids yilezi triglycerides, okunamafutha acidmahhala cholesterol nezindawo zayo phospholipids. Kwezifo ezahlukahlukene, amazinga e-lipid ahlukahluka ngamazinga ahlukahlukene.
At isifo sikashukela iziguli eziningi zinezinga eliphakeme triglycerides, i-cholesterol, i-LDL ikhuphuka ngezinga elincane. At ukukhuluphala amazinga aphakeme ayatholakala triglycerides, I-Cholesterol ne-LDL. I-Hypothyroidism kuhambisane nokwenyuka kwezinga lezidakamizwa ze-atherogenic kanye nokwehla kwe-HDL.
Okuvame kakhulu hypercholesterolemiakutholakala ku-40-60% wabantu abadala. Indima yayo ekwakhiweni kwezifo zenhliziyo iye yafakazelwa kanye nobudlelwano obuqondile phakathi kokukhuphuka kwe-cholesterol nokufa kwabantu kulezi zifo kukhonjisiwe.
I-cholesterol eboshwe ngamaphrotheni idluliselwa kwezicubu. I-density lipoproteins ephansi izithwali zayo eziphambili zezicubu, ngakho-ke zibhekwa njenge-lipoprotein enkulu ye-atherogenic, okungukuthi, idlala indima ekuthuthukisweni isifo sokuqina kwemizwa. Ama-lipoproteins aphezulu we-density adonsa i-cholesterol yamahhala futhi ayinto ephikisana nokuthuthukiswa kwe-atherosclerosis.
Imbangela ye-hypercholesterolemia yindlela yokuphila yokuhlala, ukungondleki kahle (amafutha wezilwane ngokweqile kanye nama-carbohydrate), ukubhema, kanye nokugcwala ngokweqile kwemizwelo. Kunoma yikuphi ukungasebenzi kahle kwe-lipid metabolism, kunconywa ukudla okunciphisayo kwe-lipid-okwehlisa umzimba.
Kuyini ukudla okwehlisa ukwelashwa kwe-lipid? Lokhu kudla okwenzelwe ukwehlisa i-lipids yegazi. Isimo esibaluleke kakhulu kukho ukukulungiswa okuyimfanelo nenani lengxenye yamafutha yokudla.
Ekudla, ukudla okuqukethe i-cholesterol namafutha agcwele (amafutha wezilwane) kukhawulelwe. Khipha ibhotela, ushokoledi, ushizi, amasoseji, ingulube, isinqe. Ngasikhathi sinye, okuqukethwe kwamafutha we-polyunsaturated kuyanda - kusetshenziswa uwoyela wemifino ohlukahlukene: ummbila, i-sunflower, iminqumo, i-soy, ne-linseed.
Ukudla okwehlisa i-lipid kunezinqubo ezilandelayo:
Ukudla okunezithelo (izikhathi ezingama-5-6).
Yehlisa inani lamafutha ezilwane. Ukuze wenze lokhu, ekuqaleni udinga ukukhetha inyama nezinhlanzi ezingenamafutha futhi ngaphezu kwalokho ususe amafutha abonakalayo. Ungakunciphisa okuqukethwe kwamafutha kumkhiqizo ngokubilisa kwangaphambili nokubila noma ukubhaka.
Ukwethulwa kwemikhiqizo yamaprotheni (inhlanzi enamafutha aphansi nenkukhu, imikhiqizo yobisi enamafutha aphansi, abamhlophe amaqanda).
Ukuvinjelwa kwama-carbohydrate alula (amaswidi, ushukela, ukulondolozwa, i-confectionery), agcinwa emzimbeni njengamafutha.
Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi (imifino, amajikijolo, izithelo, okusanhlamvu, izithelo ezomisiwe) enza ingxenye yokuqukethwe kwekhalori yokudla. Udinga ukudla okuyi-400-500 g yemifino eluhlaza nezithelo, esisodwa sephalishi kanye no-200-300 g wesinkwa esiphelele sokusanhlamvu ngosuku. Yonke le mikhiqizo ingumthombo wefayibha, okudingekayo ukuthuthukisa ukuhamba kwamathumbu nokususa ngokweqile cholesterol.
Ukusetshenziswa kwamafutha emifino.
Uhlobo lokuphuza oluningi (amalitha ama-2 amanzi ngosuku).
Khawulela inani lama-yolks liye ku-3 ngeviki.
Indlela enkulu yokupheka iyabilisa noma ibambe. Izitsha ezithosiwe ngokujulile nezinesinkwa azifakwa ngokuphelele.
Itafula ebala ukudla okunconyelwe futhi okwenqatshelwe izosiza ngokudla okufanele.
Imifino emisha nebandayo, imifino kanye namasaladi anamaqabunga. Izitho zangaphakathi zezilwane nezinyoni.
Izithelo ezi-peeled, izithelo ezomile, amantongomane nembewu. Ushokoledi, u-ayisikhilimu, amaswidi namanye amaswidi, ushukela, ujamu, ujamu. Khawulela ukusetshenziswa kwezinyosi.
Okusanhlamvu, isinkwa (okungcono ne-bran, rye, okusanhlamvu okuphelele). Ukubhaka (ama-rolls, ophaya, amakhukhi, ama-crackers), ama-khekhe ngo-ukhilimu, i-pasta, i-semolina, kukhawule ukusetshenziswa kwelayisi elimhlophe.
Amafutha omifino: umnqumo, ummbila, umphetho, i-walnut, isosi, udlwenguliwe. Ukupheka amafutha, isinqe, wonke amafutha ezilwane.
Izinhlanzi zasolwandle, kufaka phakathi i-oily, i-kelp. I-crayfish, i-shrimp, inhlanzi ekheniwe, inhlanzi inhlanzi.
Izinkukhu ezimhlophe, inyama yenkomo. Inyama enamafutha, i-brisket, isikhumba senkukhu nenyama ebomvu, inyama ebhemayo namasoseji, inyama yedada, ihansi.
Imikhiqizo yobisi enamafutha amancane. Ushizi wekotishi onamafutha, ukhilimu omuncu, ukhilimu neminye imikhiqizo yobisi yokuqukethwe okunamafutha aphezulu.
Noma yimaphi ama-jusi, iziphuzo zezithelo, ama-decoctions wezithelo ezomile, itiye eluhlaza, i-ginger, i-herbal. Utshwala notshwala igesi.
Ukudla okuphansi kwe-lipid nakho kungasetshenziswa ngesisindo ngokweqile sokunciphisa umzimba, noma ngabe kungekho zinguquko ekuhlolweni kwegazi. Kulesi simo, ukudla kwe-antilipid kusetshenziswa prophylactically, ngoba ukukhuluphala ngokweqile kuyisici esiyingozi sokwandisa i-LDL.
Ukwehla kwesisindo sekuyisinyathelo sokuqala esibalulekile sokushintsha umzimba we-lipid. Ukwakheka kwemikhiqizo akuhlukile, umehluko ukuthi ukudla okwelapha lesi sifo kufanele kwenziwe isikhathi eside (noma njalo), futhi ngesisindo esandayo singasetshenziswa kuze kube yilapho isisindo esifunayo sifezeka ngokushintshela ekudleni okunempilo.
Njengoba ukudla kukulinganiselayo, kungalandelwa njalo. Ukudla okunengqondo, okunhlobonhlobo nokungabikho kwemikhawulo ebalulekile kuzoba nomthelela ekunciphiseni isisindo (kufika ku-kilogremu elilodwa ngeviki) ngokusebenza komzimba okwandayo. Ngokukhuluphala, ukubamba izinsuku zokuzila kuyakhonjiswa.
Ukuze wehlise i-cholesterol, udinga ukwengeza imikhiqizo ekudleni enomthelela ekwehliseni izinga layo:
i-olive, i-linseed, i-nati, i-sesame amaranth uwoyela,
ijikijolo, i-aronia, ama-sitrobheli, ama-cranberry, amagilebhisi abomvu, ama-lingonberry,
imbewu yefilakisi, i-fenugreek, ubisi lwethosi kanye nembewu yesesame,
izinhlanzi ezinamafutha olwandle
izindunduma (amaphuphu, ubhontshisi, udali, ubhontshisi),
imikhiqizo ye-soy (tofu, miso).
I-cholesterol ephansi kakhulu inyuka nengcindezi engapheli yengqondo, ngakho-ke ukuvezwa kohlelo lwezinzwa kuyisidingo.
Ukuphumula, ukuzindla nokuzindla kusiza ukwehlisa i-cholesterol.Imfuneko yokwelashwa ukwanda kokuzivocavoca umzimba.
Ukudla okwejwayelekile kwe-lipid-okwehlisa, uhlu lomkhiqizo:
Izithelo nemifino emisha. Zidla kakhulu okuphekiwe futhi kusetshenziswe njengesitsha eseceleni. Kukhethwa imifino ephansi ye-carb (zonke izinhlobo zeklabishi, i-zucchini, ithanga, isikwashi, isitshalo seqanda, ukhukhamba, ukwatapheya, upelepele, uphizi oluhlaza, utamatisi). Ezithelo eziwusizo: i-Persimmon, i-kiwi, i-grapefruit, ihalananda, amawolintshi, ama-apula kanye namapheya. Naka izithelo ezinokuqukethwe okuphezulu pectin - Lezi yizithelo zomawolintshi, ama-apula, amagilebhisi, ama-cranberry, ama-apula omisiwe, amajikijolo e-cornel, i-viburnum. Ama-Pectins enza umsebenzi wamathumbu ojwayelekile, uthuthukise imetabolism, i-cholebol yeshukela bese uwususa.
Amajusi: i-orange, i-grapefruit, i-apula, i-beetroot kanye ne-karoti.
Izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle. Kufanele babe yisisekelo sokudla kwe-hypercholesterolemia. Udinga ukudla izinhlanzi ezinamafutha amancane, futhi nge-hypercholesterolemia izikhathi ezi-2 ngesonto zifaka izinhlobo ezinamafutha kumenyu: i-mackerel, i-flounder, i-herring, i-salmon. I-Fish roe ne-squid kukhawulelwe ngenxa yokuqukethwe kwabo kwe-cholesterol ephezulu.
Ulwandle kale. Lo mkhiqizo ucebile ngezinto ezilandelwayo (iodine, i-selenium) ne-fiber.
I-legumes njengomthombo wamaprotheni wemifino kanye nefayibha. Ingafakwa ekudleni nsuku zonke.
Imbewu yesame, fenugreek, ifilakisi, ilayisi. Izinzuzo zabo zibhekwa ezicini ezimbili: lokhu kungamthombo we-fiber hhayi kuphela, kepha nama-phytosterols namafutha, asiza ngokubambana ekulweni nalesi sifo. Okuqukethwe okuphezulu kwama-phytosterols kubuye kuhlukaniswe ngamafutha ommbila, owoyela kanye nowokudlwengulwa, ama-alimondi. Zitholakala nezithelo nemifino. Ukushoda kwemali yabo kuyabonakala esikhathini sobusika sentwasahlobo, ngenxa yokwehla kokusetshenziswa kwabo. Ngasikhathi sinye, isabelo semikhiqizo yemfuyo edliwayo siyanda. Ngalesi sikhathi, kungakuhle ukuthi ungeze futhi ukudla okucebiswe ngama-phytosterols, ahlukaniswe ngezinto zokwakha, ngenxa yobuchwepheshe obukhethekile (ngokwesibonelo, i-kefir danacor, kanye ne "phrofayili engu-120/80").
Ososayensi babuye bakufakazela ukuthi ngokwemuva kokusetshenziswa kwama-phytosterols, kukhona ukuncipha kokukhiqizwa i-cortisol, okuthinta kabi isimo sohlelo lwezinhliziyo (kukhulisa ithoni yemikhumbi namandla ezwi lokuqina kwenhliziyo, kusiza ukukhuphula umfutho wegazi), kugcina isodium namanzi emzimbeni.
Imikhiqizo ye-soya enesoyisi nemibhalo. Bangumthombo wamaprotheni futhi abanawo i-cholesterol. Ezingeni eliphakeme, kunconywa ukuthi iziguli zishintshe inyama ngemikhiqizo ye-soy.
Garlic - Imvelo i-statin. Ukuthola umphumela, udinga ukusebenzisa izinyanga ezi-3, ama-2 clove nsuku zonke. Ukwelashwa okunjalo akunakuthathwa izifo zezifo zamapheshana emathunjini.
Izifundo zokuqala zemifino (isobho seklabishi, amasobho ahlukahlukene, isobho le-beetroot, i-borscht). Ukupheka kubo kuphezu kwamanzi. Futhi engeza okungenani uwoyela wemifino.
Inyama enamafutha amancane nenkukhu. Kwanele ukuzisebenzisa izikhathi ezi-1-2 ngesonto. Ukudla kubhekwa njenge-turkey inyama kanye nebele lenkukhu. Inyama ibilisiwe ngaphambi kokupheka, bese ungayibhaka.
I-rye, okusanhlamvu, isinkwa se-bran, isinkwa nesinkwa sofulawa soy. Njengokubhaka khekhe, ungasebenzisa amakhukhi angadliwe nesinkwa se-bran.
Imikhiqizo yobisi, ushizi wekotishi kanye noshizi onamafutha aphansi. Akukhona ukhilimu omuncu omuncu kakhulu ongasetshenziswa ezitsheni.
Amaqanda aphelele enanini lama-3 ngesonto, namaprotheni enkukhu - ngaphandle kwemikhawulo.
Uhlu lwemikhiqizo luhlinzekelwa okusanhlamvu. Ungadla i-buckwheat, i-oatmeal, irayisi elinsundu elibilisiwe ngokulinganisela. Ngokukhuluphala, imvamisa yokudla okusanhlamvu iyancipha.
Amafutha emifino angachaziwe. Zisetshenziselwa ukugqoka ukudla okulungiselelwe. Ngosuku ongadla ngalo 2 tbsp. l I-sesame ewusizo, ifilakisi, u-soy, umnqumo, ummbila.
Amantongomane (ama-alimondi, ama-walnuts, umsedari) kanye nembewu. Zinamafutha awusizo we-monounsaturated, kepha uma kubukwa okuqukethwe kwazo okuphezulu kwekhalori, inani lilinganiselwe ku-20-30 g ngosuku.
Umhluzi we-Oat noma ujeli, ngoba i-oats isiza ukunciphisa i-cholesterol, ukukhuluphala ngokweqile futhi yenza ngokwejwayelekile i-lipid metabolism.
Itiye eliluhlaza nelamula, itiye nge-ginger, umhluzi we-rosehip, amanzi we-mineral owenziwe ngamanzi, ujusi.
Izici zokudla okwejwayelekile kwe-lipid
Ukudla okwehlisa i-lipid kwehlisa i-cholesterol embi. Inani layo lenyuka lilimaza uhlelo lwenhliziyo, oluyingozi ngokuhlaselwa yisifo senhliziyo, imivimbo, ischemia. Imiphumela emibi emincane i-nausea, ukugabha, ukwakheka kwezigcawu ze-atherosulinotic. Izinga lempilo liwohloka kakhulu.
Ngokwesibalo sabantu abadala emacaleni angaphezu kwama-50%, kwenzeka i-hypercholesterolemia. Amazinga egazi ama-lipids akhuphuka, wona, ahlanganiswa ngama-triglycerides, amanoni acid, cholesterol ne-phospholipids. Ngokuya ngesifo nokuphazamiseka emzimbeni, lokhu noma ngaleyo nto kuyanda.
Ukudla okwehlisa i-lipid kubekelwe ukukhuluphala, isifo sikashukela kanye nosongo lwesifo senhliziyo. Lolu hlelo lokudla okunempilo lubekwe ngokuhambisana nokwelapha okwelapha. Ngaphezu kwalokho, ekudleni okwehlisa i-lipid kusebenza njengokuvikelwa okuhle kwe-atherosclerosis. Kepha kufanelekile nakubantu abaphilile ukuthi banciphise isisindo esengeziwe.
Ukudla okwehlisa i-lipid kususelwa ekusetshenzisweni kwenani lama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, anomthelela ekunciphiseni isisindo. Bathuthukisa i-lipid metabolism emzimbeni.
Imenyu ingahlukahluka futhi ihehe. Ama-50-60% okudla yimifino yemvelo, izithelo nemikhiqizo yokusanhlamvu. Kodwa-ke, iningi lazo kufanele libe luhlaza futhi lutsha. Ukudla kuhilela ukukhawula amafutha namaprotheni. Umzimba odingeka kakhulu yi-monounsaturated ne-polyunsaturated ngezilinganiso ezilinganayo, nawo ugcwele. Ukuze uthole lokhu kudingeka udle izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle. Futhi kwimenyu yokudla kunenani elikhulu lamaprotheni.
Imithetho yokudla okunempilo
Ngokusho kwezazi zezempilo, umphumela omuhle kakhulu ungatholakala uma unamathela ekudleni okunjalo okwezinsuku eziyi-7. Kepha ukuze yonke into isebenze, futhi wehlise isisindo, kufanele uhambisane nezincomo ezithile. Imithetho yokudla okondlayo ekudleni okwehlisa i-lipid imi ngalendlela elandelayo:
Akumele uvumele ukushaywa yindlala. Ukudla ekudleni kufanele kube njalo futhi kube kukuncane. Kungcono ukuthi udle izikhathi ezingafika kwezi-5-6 ngosuku. Usayizi wokuphaka kufanele ungene endebeni.
Imikhiqizo kufanele ikhethwe esezingeni eliphakeme, kanye nekhalori ephansi futhi inempilo.
Zonke izitsha kufanele zidliwe, zibiliswe noma zibhakwe, futhi zidliwe zingaphekiwe.
Okokugcina uvunyelwe ukuthi udle okungenani amahora amane ngaphambi kokulala.
Awukwazi ukudla okungaphezulu kwe-1300 kcal ngosuku.
Qiniseka ukwenza umsebenzi womzimba ngesikhathi sokudla.
Imikhiqizo yamaphrotheni efana ne-cottage shizi, inyama nokudla kwasolwandle kufanele kube ngu-50-60 g ngosuku. Kepha kufanele aqukathe inani elilinganiselwe lamafutha.
Isinkwa asingadliwa ngaphezu kwezingcezu ezi-2 ngosuku.
Naphezu kweqiniso lokuthi ukudla okujwayelekile okwehlisa i-lipid kungokwelashwa ngokwemvelo futhi kuchazwe ngodokotela, kungahle kungalungeli wonke umuntu. Lolu hlelo lwamandla alinconyelwe ukusetshenziswa ezimweni ezilandelayo:
ngenkathi uthwele ingane futhi uncelisa,
ngokwanda kwezifo ezingamahlalakhona,
nge-insulin encike kushukela
Ngaphambi kokuthi uqale ukunamathela ekudleni, udinga ukubonisana nodokotela wakho futhi uhlolwe kudokotela.
Imikhiqizo evunyelwe futhi evinjelwe
Ukudla okwehlisa i-lipid kususelwa kokudla okulimazayo nokunconywayo. Uhlu lwalezo ezivunyelwe liqukethe:
ukudla kwasolwandle nezinhlanzi ezinamafutha ezinjenge-halibut, hake, haddock, cod, sardines ne-tuna, ezingaphekwa ngezindlela ezihlukile,
amafutha emifino avela kumantongomane, ku-canola, kwifilakisi nakwimbewu yomnqumo,
zonke izinhlobo zezithelo ezingavuthiwe, amajikijolo nemifino, abilisiwe, angabilisiwe ngaphandle koshukela, eqandisiwe, njengezaqathi, i-zucchini, isitshalo seqanda, ama-turnips, ama-radish, iklabishi elimhlophe, utamatisi, ukhukhamba, i-legumes, ummbila, u-squash,
amapharele, ubhanana, ama-apula, amapetshisi, ama-sitrobheli, ama-currant, uphayinaphu,
amakhambi nezinongo, isb. isipinashi, dill, iparsley, ibasil, isaladi eluhlaza,
izinhlobo ezahlukahlukene zokusanhlamvu nezinhlamvu,
imikhiqizo yobisi enamafutha aphansi, isibonelo, ushizi wekotishi, i-kefir, iyogathi yemvelo, ushizi omhlophe,
iziphuzo ezingafakiwe, ezinjengetiye eluhlaza, ama-decoctions amakhambi, amaminerali asamanzi, iziphuzo zezithelo kanye nama-compotes.
Kukho konke lokhu ungapheka izitsha ezimnandi nezihlukahlukene. Ziqukethe isilinganiso esifanele sama-carbohydrate ayinkimbinkimbi namaprotheni. Abantu abangahlushwa isisindo esibucayi bangasusa ukudla okunciphisa okwe-lipid nelayisi eliphekiwe emanzini, i-rye noma isinkwa se-wholemeal, nezinhlamvu ngaphandle koshukela. Ukudla okunjalo akuvumeli ukuba ulambe, ngenkathi kugcwala umzimba ngazo zonke izinto ezidingekayo namavithamini.
Ukudla okwehlisa i-lipid kudinga ukufakwa kokudla okulandelayo ekudleni:
amafutha agcwele inyama (isilwane): ingulube, inyama yenkomo, iwundlu, amadada, amasoseji, i-ham, ama-meatball, isibindi, ubuchopho, imajarini, imayonesi, uwoyela kakhukhunathi, izinkukhu ezibomvu, ukudla okusemathinini,
ushizi onamafutha nemikhiqizo yobisi,
amaswidi: ushokoledi, ama-marmalade, amaswidi, ama-halva, ama-marshmallows nama-marshmallows,
ukubhaka nesinkwa esimhlophe, amakhukhi, ama-roll, amakhekhe namakhekhe,
zonke izinhlobo zotshwala
isibindi ne-caviar ye-sturgeon, crayfish.
Ukudla ngale ndlela, ungasungula ukugaya okunengqondo.
Bukela le vidiyo ekudleni ukuze wehlise i-cholesterol:
Ezikhiqizweni ezingenhla zokudla okwehlisa i-lipid, kungenzeka ukwenza imenyu enengqondo. Ngenxa yalokhu, cholesterol izokwehla futhi nempilo izothuthuka. Isibalo sokulethwa kufanele okungenani sibe ngu-4-5 ngosuku. Ngaphezu kokudla okuyinhloko, kusenokudla okulula. Ziqukethe izithelo, ama-smoothies noma amasaladi anemikhiqizo yobisi.
Imenyu yamasonto onke yokudla okwehlisa i-lipid imi ngale ndlela elandelayo:
Usuku lweviki Ibhulakufesi Isidlo sasemini Isidlo sasemini Itiye eliphakeme Ukudla kwakusihlwa
UMsombuluko I-Oatmeal emanzini netiye eliluhlaza Izithelo noma ingilazi yesiphuzo sobisi esiklwelwe I-pepper bell enobumba ne-zucchini, ungangeza ifilidi leenkukhu elibilisiwe I-sandwich eyenziwe ngesinkwa se-rye nemifino Inyama engenamafutha nge-kefir
NgoLwesibili Indebe ye-bran enezithelo ezomisiwe netiye le-herbal Ingilazi ye-yogurt yemvelo engafakwanga amajikijolo Buckwheat ebilisiwe nenkukhu Ushizi wasekhishini ngamakhambi I-Cottage shizi casserole ngaphandle koshukela, kepha ungangeza ubhanana noma i-pearl
NgoLwesithathu Omelet ngemifino ethosiwe Rye ufulawa ubhontshisi kanye ujamu Inkukhu Yemifino Yenyama yenkukhu Isaladi yamaGreek ngamafutha omnqumo Inhlanzi ebhakwe
Lwesine I-Low Fat Raisin Curd neTiye eluhlaza Ingilazi yesiphuzo sobisi esiklwelwe Ilayisi emanzini ngesipuni senkukhu ebilisiwe noma fillet turkey Isaladi yezithelo nge-Lemon Juice Ama-Pepper Baked noKefir
NgoLwesihlanu Rye ubhontshisi noju nekhofi Amagilebhisi Izithelo kanye ne-cottage shizi casserole Ukhukhamba noma Utamatisi ngeqanda elibilisiwe Isaladi yemifino egqoka i-olive olive
NgoMgqibelo Igrapefruit nekhofi eshisayo Omele Buckwheat ngamaqebelengwane enhlanzi Isaladi yamaGrikhi noshizi we-feta Izinhlanzi ezibhakiwe ngemifino
ISonto Oatmeal emanzini ngejusi elisanda kufakwa Ingilazi yesiphuzo sobisi olubilisiwe I-Millet porridge enezithelo ezomile Amagilebhisi Imifino ethosiwe
Ama-Lipid-wehlisela Ukudla Ungadliwa
Inani lemikhiqizo ekudleni likhulu impela, ngakho-ke ungapheka izitsha eziningi ezimnandi ezihlukile kubo. Ekudleni okwehlisa i-lipid, ungapheka izitsha ngokuya ngezindlela ezilandelayo zokupheka:
I-Semolina ne-apula pudding.
Izithako: amaqanda enkukhu, i-semolina, ama-apula, usawoti, ibhotela, ubisi olungama-50 ubisi olunamafutha amancane.
Peel bese usika izithelo. Bilisa iphalishi se-semolina obisini. Ngemuva kwalokho faka izingxenye ezisele engxenyeni bese ushaya kahle. Beka isisindo eshidini lokubhaka bese ubhaka kuhhavini cishe imizuzu engama-40.
Izithako: iphakethe likashizi wamahhala ongenawo amafutha, izaqathe, okumhlophe qanda, izipuni ezimbalwa zikafulawa, semolina, isigamu sengilazi yobisi lwe-skim, usawoti, uwoyela wemifino.
Cwecwa bese uthambisa imifino kahle. Ubilise ikhekhe ushizi, izaqathe, semolina nobisi, ibhotela phezu kokushisa okuphansi. Okulandelayo, amaprotheni, ushizi wekhadishi nosawoti kuyengezwa ku-sele esele. Bopha inhlama bese wenza ama-cheesecake. Ungabhaka kuhhavini kuze kube nsundu wegolide.
Izithako: abamhlophe beqanda, i-sweetener, izinkomishi ezi-2 zamanzi.
Ukulungiselela ukudla kushesha futhi kulula. Okokuqala, pholisa amaprotheni esiqandisini, bese ushaya kahle nge-sweetener bese ubeka emanzini abilayo. Pheka umzuzu owodwa.
Bukela kule vidiyo ukuthi ungayenza kanjani i-dessert ye-Snowball:
Uma unamathela kule ndlela yokunciphisa isisindo, ke ukudla kudonsa imiphumela emihle. Uhlelo lokwehlisa i-lipid likuvumela ukuthi ukhiphe kuze kufike ku-10 kg wesisindo ngokweqile. Ngesikhathi sokudla, impilo kanye nemizwa iyathuthuka. Ubuhlungu bushiya indawo yenhliziyo, ukufupheka komoya kuyama, akusekho ukwanda komzimba.
Kodwa yonke le miphumela ingatholakala kuphela ngezakhi ezimbalwa zokudla okunempilo kwe-hypolipidemic. Ungahlola umphumela wokudla ngokudlula ekuhlolweni kwegazi kwe-cholesterol. Okungcono kakhulu, kwenze ngaphambi nangemva kwalokho.
Kepha akufanele ulindele ngokushesha ukuncipha kwesisindo kulokhu kudla. Le yinqubo ende futhi eyinkimbinkimbi. Okokuqala, kubalulekile ukuthuthukisa isimo sempilo nenempilo yomzimba. Futhi yilapho kuphela lapho kuzoba lula kuye ukuthi alahlekelwe isisindo ngokweqile.
Ukuphuma ekudleni nakho kubalulekile. Kancane kancane, udinga ukubuyela endleleni yakho ejwayelekile yokuphila. Kodwa-ke, imigomo yokudla okungenamsoco ne-hypolipidemic kufanele igcinwe ukuze ithuthukise futhi yandise umphumela. Ochwepheshe bancoma ukuhlanganisa ukudla kwakho okuzayo ngesisekelo se-"80 kwezingu-100", okungukuthi, gcina uhlelo lokudla lwama-80% bese iphambukisa imenyu ngo-20%. Lokhu kuzosiza ukugwema ukuphazamiseka kanye nokuphazamiseka kwengqondo.
Futhi nakhu kabanzi ngomshini wokusebenza kanye nokusebenza kwezidakamizwa ezokwehlisa i-lipid.
Ukudla okwehlisa i-lipid kusiza ukumisa umsebenzi womzimba, ukunciphisa umzimba nokuqinisa amasistimu abo. Uguqula izimiso zokudla okunempilo. Lokhu kudla kufanelekile ngezinhloso zokwelapha, nokwenza ngcono ukubukeka kanye nokunciphisa umzimba.
Izidakamizwa ezokwehlisa i-Lipid zinqunywa lapho isiguli sinenkomba yomzimba overestimated, futhi ukudla okujwayelekile nemidlalo akusizi. Ukulungiswa kwefayibha yokudla okunomphumela ophansi we-lipid kusiza ukudla okuncane, kugcwalise isisu. Imiphi imikhiqizo emisha emakethe?
Ukudla okukhethekile kwe-hypocholesterol kusebenza kwabesifazane nabesilisa, nakwabadala, ezigulini ezinomfutho wegazi ophakeme. Isisekelo semenyu yeviki inombolo yetafula 10. Imikhiqizo ilula kakhulu, futhi kulula ukwenza imenyu yesampula, ngoba izindlela zokupheka zikhethiwe kusuka kwizithako ezejwayelekile.
I-Lipoic acid imiselwe ukunciphisa umzimba kanye nokudla nemidlalo. Ungayithatha kanjani, kanye nomthamo ukhethiwe ngamunye ngamunye. Kwesinye isikhathi i-carnitine isetshenziswa ku-alpha lipoic acid.
Ukudla okwejwayelekile kwe-lipid okwehlisa isisindo
Ukudla okwejwayelekile kwe-lipid okunciphisa uhlobo lokudla okusiza ukwelapha umzimba futhi wehlise isisindo. Uhlu lwemikhiqizo oluvunyelwe futhi olunconyelwe ukusetshenziselwa ilungele abantu abane-pathologies yephepha lesisu, izinhliziyo zenhliziyo nezinzwa. Ngaphezu kwalokho, ukondleka okwelapha ngemikhiqizo enempilo kukuvumela ukuthi ubhekane namaphawundi angeziwe futhi usondele ngesibalo esifanele. Funda ngokuningiliziwe lapha ngezansi ngokudla okwehlisa i-lipid, izimiso nemithetho yokugcinwa kwayo, imenyu yesampula evikini nesonto nemibandela yokuphambana.
Ukudla okwehlisa i-lipid kuwukudla okwelatshwayo okuhlinzekelwa iziguli ezinesifo sesibindi nethambo yenhliziyo, ukwehluleka kokujikeleza, i-pyelonephritis, i-nephritis engapheli kanye nokukhuluphala. Elinye igama laso yithebula lokudla le-10. Umgomo wokudla okwehlisa i-lipid-wehlisa ukudla ushukela wegazi kanye ne-cholesterol, etholakala ngokuqeda ukudla ngamafutha ezilwane, ukudla okuqukethe i-carbohydrate elula nosawoti omkhulu.
Ngenxa yokwehla kwe-cholesterol yegazi, ngemuva kwenyanga umuntu uphawula ukuthuthukiswa kwesimo - umzimba uyahlanzwa ubuthi nobuthi, ukwehla kwesisindo kwenzeka, ukuguquguquka komzimba kuyenyuka futhi ithoni yomzimba iyakhuphuka. Ukudla okwehlisa i-lipid akusetshenziselwa ukwelapha kuphela, kepha futhi njenge-prophylaxis yezifo ezinjenge-atherossteosis, inhliziyo kanye ne-gastrointestinal. Imikhiqizo enconyelwe lolu hlobo lokudla komzimba nayo isetshenziswa ngemuva kokuhlinzwa kwe-coronary artery bypass.
Umthetho oyinhloko wokunamathela ekudleni okwehlisa i-lipid ukusetshenziswa kwezidlo ezinokuqukethwe okuncane kwe-cholesterol, ama-carbohydrate alula kanye namafutha ezilwane. Ukudla kuqukethe ama-calorie aphansi kanye nokudla okunamafutha amancane ahambisana nemigomo yokudla okufanele okunempilo. Imithetho yokudla okwehlisa i-lipid:
Ukudla kokugcina kufanele kwenzeke amahora angama-3-4 ngaphambi kokulala. Ngemuva kwalokho, ukudla okungenamsoco nanoma yikuphi, kuvunyelwe, ukudla akunconywa.
Zonke izinsuku udinga ukuphuza amanzi ahlanziwe - okungenani amalitha ayi-1,4.
Ubuchwepheshe bezitsha zokupheka ezivela emikhiqizweni evunyelwe: ukupheka, ukubila. Ukuphaka noma ukubhaka ukudla akunconyiwe. Kuvunyelwe ukudla ukudla okuthosiwe ngamanani amancane okungenani kanye noma kabili ngesonto.
Indlela yokudla iyingxenye. Ukudla nsuku zonke amakhalori (1200-1400) kufanele kuhlukaniswe ngemithamo emihlanu.
Izinongo nosawoti kufanele kudliwe ngobuningi.
Odokotela batusa ukuhlanganisa ukudla okwehlisa i-lipid nokuzivocavoca. Ukwelashwa ngokomzimba kwabantu abane-pathologies ye-inhliziyo kushiwo uchwepheshe.
Ukuze ulondoloze ukulinganisela kwezinto ezilandelwayo emzimbeni, kufanele uthathe inkimbinkimbi yamavithamini noma amaphilisi we-calcium, ngoba imikhiqizo equkethe icishe ingafakwa ngokuphelele.
Ukusetshenziswa kwemikhiqizo efanelekile yokupheka izitsha zansuku zonke kuyisihluthulelo somphumela ophumelelayo wokuqeda ukudla okwehlisa i-lipid. Ngezansi kunhlu ezintathu ezizokusiza ukwazi ukuthola imenyu yakho yokudla kwezempilo. Cabanga ngohlu lwemikhiqizo evunyelwe neyenqatshelwe yokudla okwehlisa i-lipid.
Ukwenqaba kwezinhlobo ezithile zokudla kuzosiza ukwehlisa kakhulu izinga le-cholesterol egazini, kuthuthukise inhlala-kahle futhi kuhlanze umzimba wobuthi. Okulandelayo uhlu lokudla okuqukethe inani elikhulu lamafutha ezilwane, i-cholesterol, kanye nama-carbohydrate alula. Ukuze uqambe imenyu yokunciphisa i-lipid kuyadingeka ukuthi unake lolu hlu.
imikhiqizo yobisi nemnandi yobisi,
imajarini, isundu, uwoyela kakhukhunathi, uwoyela wokupheka,
umhluzi onamafutha enyama, inyama ebhemayo, inyama enokuqukethwe okunamafutha amaningi, i-offal (isibindi, ubuchopho, amaphaphu),
isikhumba senkukhu (inkukhu, idada),
ukudla okusheshayo nokudla okulula,
inhlama yenhlanzi nesibindi,
Ukudla kwasolwandle: i-sturgeon, igobolondo, umhluzi, umqhele, crayfish
imayonnaise, amanye amasosa anamafutha,
isinkwa esimhlophe, i-confectionery, ushukela, ushokoledi,
Ukufaka esikhundleni sokudla okunamafutha futhi okungenampilo ngezitsha ezinempilo kusuka ekudleni okunconyiwe, umuntu uzozwa umehluko enhlalakahle emavikini ambalwa ngemuva kokuqala ukudla. Ukunakwa ikakhulukazi kufanele kukhokhwe ekudleni okuqukethe izinto eziwusizo zomkhondo, amavithamini, i-fiber, ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Ukudla kwezitshalo okusha kuyisisekelo sokudla okwehlisa i-lipid. Uhlu lokudla okunconyelwe ukudla:
imifino emisha enokuqukethwe okuphansi kwesitashi (iklabishi, isithombo, ukhukhamba, i-zucchini, utamatisi),
amajikijolo, izithelo (ama-apula, amagilebhisi, amapharele),
imifino - iparsley, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isipinashi, isaladi,
amajusi asanda kufakwa, iziphuzo zezithelo ezingenakuthengwa, amanzi acwebile,
oatmeal noma amabele
imikhiqizo yobhontshisi - ukwenza kabusha ukuphakelwa kwamaprotheni,
i-olive, i-sunflower, uwoyela odlwenguliwe.
Ngokwesilinganiso esilinganiselwe, ngokudla kwe-hypolipidemic, kuvunyelwe kumuntu ukuthi angasebenzisi kuphela ukudla okunconyelwe ngokuqinile okwakha isisekelo sokudla. Kubantu abaphendukela ekudleni okunjalo hhayi ukwehla kwesisindo, kodwa impilo, akudingeki banikeze isinkwa se-rye, futhi i-pasta enerayisi ingadliwa kabili ngeviki. Uhlu lwemikhiqizo eyamukelekayo yokudla okwehlisa i-lipid:
inyama yenkomo ebilisiwe noma ebilisiwe
itiye eliluhlaza nelimnyama ngaphandle koshukela, ikhofi esheshayo,
ezinye izinhlobo zamantongomane: ama-alimondi, ama-hazelnuts, ama-walnuts,
i-kefir enamafutha aphansi kanye noshizi wekhishi,
umhluzi wesibili ngemuva kokupheka inyama ebondayo,
inani elincane lokuthambisa
isinkwa rye, ama-toast kuyo,
Imenyu yokudla iqukethe izindlela zokupheka ezilula lapho ukupheka kungathathi isikhathi esiningi. Izingxenye ezincane zokudla okunempilo kuzovumela umuntu ukuba azizwe elula. Ukubona imenyu yokudla ye-hypolipidemic, umuntu akufanele avumele imizwa yendlala. Uma kuvela, ukudla okulula okulula kungokunye kokudla okuvunyelwe. Okulandelayo, funda imenyu eyisampula yokudla okwehlisa i-lipid ngeviki, okuzosiza ukufeza umphumela omuhle wokunciphisa umzimba nokuphulukisa.
Ukudla kwasekuseni - amagremu angama-200 we-oatmeal ebilisiwe, inkomishi yetiyi eluhlaza efudumele.
Isidlo sasemini - izithelo ezihlanganisiwe namajikijolo (250 g).
Isidlo sasemini - ingilazi yejusi le-apula, upelepele ocwengekile - ucezu, irayisi ebilisiwe (kufika ku-200 amagremu).
Isidlakela - ubhontshisi wesinkwa rye, apula.
Ukudla isidlo sakusihlwa - ipuleti yemifino ebasiki.
Ukudla kwasekuseni - ipuleti lesaladi yemifino elinamafutha omnqumo, itiye noma amanzi.
Isidlo sasemini - amagilebhisi, ama-3 plums.
Isidlo sasemini - isobho semifino, isinkwa sikakolweni.
Isidlakela - izithelo ezomisiwe (kufika ku-250 g).
Ukudla isidlo sasemini - inhlanzi enezinhlanzi ezinesaladi yemifino, ingilazi yamanzi.
Ukudla kwasekuseni - ushizi wekhishi (kufika ku-260 amagremu), inkomishi yekhofi akuyona imvelo.
Isidlo sasemini - ijusi lewolintshi, i-buckwheat, ucezu lwebele lenkukhu (amagremu ayi-100).
Isidlakela - ingxenye yesaladi yamaGreek.
Ukudla kwakusihlwa - inyama ebilisiwe (kufika ku-200 amagremu) ngesitsha esiseceleni semifino ethosiwe, amanzi.
Isidlo sasemini siyisithelo, izicucu ezimbalwa.
Isidlo sasemini - ipuleti yemifino ebasiki.
Isidlakela - kwasolwandle (200 amagremu).
Ukudla isidlo sasemini - inhlanzi eshisiwe yezinhlanzi, amaminerali asamanzi.
Ukudla kwasekuseni - ingxenye encane yamabele wamabele, itiye.
Isidlo sasemini - ama-tangerines ama-2, ujusi wemvelo.
Isidlo sasemini - i-borsch kumhluzi wesibili, itiye noma amanzi.
Isidlakela - izithelo ezomisiwe (250 amagremu).
Dinner - ipuleti isaladi yemifino.
Ukudla kwasekuseni - ijusi lewolintshi, u-200 g wephalishi kusuka kwilayisi elinsundu enongwe ngoju.
Isidlo sasemini - izithelo netiye.
Isidlo sasemini - isinkwa esigaqiwe, isobho elibusayo.
Isidlo sasemini ntambama - isaladi yezithelo ngamajikijolo.
Ukudla kwakusihlwa - ingxenye encane yesaladi yemifino, amazambane ayi-2 abilisiwe, ujusi.
Ukudla kwasekuseni - ushizi wekhishi (kufika ku-260 amagremu), inkomishi yetiye.
Isidlo sasemini - izithelo ezihlanganisiwe namajikijolo.
Ukudla isidlo senkukhu, amanzi noma isiphuzo setiye.
Ukudla okusahlwa - idlanzana lamantongomane, ingilazi ye-kefir.
Ukudla isidlo sakusihlwa - ipuleti yemifino enikezwe, ujusi wemvelo.
Isikhathi sokudla okwehlisa i-lipid sisuka ezinyangeni ezi-1 kuye kwezingu-3, ​​kuya ngenhloso. Ngalesi sikhathi, kufanelekile ukudla ukudla okunconyiwe futhi uthathe amavithamini. Abantu ababoniswa ukudla okwehlisa i-lipid ngenxa yezizathu zezempilo, kungcono ukunamathela ekudleni okunempilo isikhathi eside ngangokunokwenzeka, futhi ukwehlisa isisindo kungaqhubeka nokudla okujwayelekile okunempilo ngemuva kwenyanga.
Naphezu kweqiniso lokuthi okudla okwehlisa i-lipid kuhlangabezana nemithetho yokudla okunempilo, kufakwa kwabanye abantu.Uma ungabaza ukuthi ungafaki ukudla okungaka ekudleni, thinta uchwepheshe. Kukuziphi izimo lapho ukudla kwe-lipid-ukwehlisa kuphansi emafutheni ezilwane, i-cholesterol kanye nama-carbohydrate alula afakiwe:
Ukuntuleka kwe-calcium emzimbeni,
Izifo ezingalapheki esikhathini esiyingozi,
Isifo sikashukela i-mellitus insulin,
Umhlahlandlela Womuthi Wokuzala, Prakthiza - M., 2015. - 846 c.
I-Zakharov Yu.L. Isifo sikashukela Indlela entsha yokwelashwa. I-SPb., Ukushicilela indlu "Peter", 2002, amakhasi angama-544, kusakazwa amakhophi angama-10,000.
I-Astamirova, uH. Ukwelashwa kwesifo sikashukela okungajwayelekile. Iqiniso nenkohliso / Kh. Astamirova, M. Akhmanov. - M.: Vector, 2010 .-- 160 k.
Ingabe i-cholesterol iyimbi ngempela
I-cholesterol yinto efana namafutha emvelaphi yesilwane, engena emzimbeni womuntu ngokudla, kodwa futhi engakhiqizwa ngokuzimela ngamangqamuzana.
Umuthi obalulekile womzimba womuntu ubandakanyeka ekwenziweni kwe-bile acid, ama-hormone, kanye nenqubo yezinye izinqubo ezibalulekile ze-biochemical
Inani le-cholesterol emzimbeni womuntu lincike kokuqukethwe kwekhalori nokuqukethwe kwamafutha okudla okudliwayo. Emncane, okweqile kwe-cholesterol edliwayo ngokudla akubangeli ukubambezeleka komzimba. Ebudaleni, izinqubo ze-metabolic ziyehla.
Ngakho-ke isiphetho: akuyona i-cholesterol ngokwayo eyingozi empilweni yabantu, kodwa okuqukethwe kwayo okwandayo emzimbeni. Amazinga we-cholesterol kufanele abhekwe yinoma ngubani ofisa ukunweba impilo esebenzayo nentsha. Ukuhambisana namazinga okunomsoco obekwe esisekelweni semenyu yokudla okwehlisa i-lipid kuzosiza ukugcina i-cholesterol esezingeni eliphephile empilweni.
I-cholesterol ethe xaxa ifakwa ezindongeni zemithambo yegazi, okudala ukuvela kwesifo senhliziyo
Izinto eziyinhloko zokudla
Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Zitholakala izithelo nemifino ecebile nge-fiber, kanye nakuma-okusanhlamvu. Lapho uhlanganisa imenyu, okungenani i-50-60% yokudla okuphelele kwekhalori kufanele kunikezwe imikhiqizo equkethe ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Ngakho-ke inqubo ejwayelekile yansuku zonke yokuphuza kwabo kufanele ibe ngu-500-600 g, iningi lazo yimifino nezithelo.
Ibhalansi yamafutha. Ibhalansi yamafutha we-polyunsaturated, monounsaturated and saturated kufanele ibe yi-1: 1.
Phakathi kwemikhiqizo yenyama nenhlanzi, okuthandwa kunikezwa izinkukhu (ngaphandle kwesikhumba) nenhlanzi ngaphezulu kwenyama yezilwane. Lungisa izitsha usebenzisa izindlela zokwelapha ukushisa njengokupheka, ukubhaka, nokupheka microwave.
Vimbela ukudla okudla sekwedlule isikhathi (ngemuva kwamahora ayi-19) Isidlo sakusihlwa sikhanya ngangokunokwenzeka ngokufakwa kokudla okunokuqukethwe okuphezulu kwefreyimu yesitshalo. Uma ngemuva kokudla umuzwa wokulamba ungakasalanga, ungadla isanqante esingu-1, i-apula noma uphuze 1 inkomishi ye-kefir.
Ukunciphisa ukubambelela kwekhalori phambi kokukhuluphala. Ngokwesilinganiso, inani eliphelele lama-kilojoule ngosuku akufanele lidlule i-1200 Kcal.
Uhlelo lokudla okunempilo lokudla kwe-hypolipidemic wukudla okubandakanya izidlo ezinhlanu - ezintathu eziphambili nezimbili ezengeziwe.
Ukudla okufanele kufanele kube sezingeni eliphakeme, kuhluke futhi kube nokulinganisela ukuze kulondolozwe ukulinganisela kokudla izakhi kanye nokuchitha amandla
Ithebula lokudla okungavunyelwe ngokudla okwehlisa i-lipid
Ubisi nemikhiqizo yobisi: ukhilimu, ibhotela, ubisi, ushizi, ukhilimu omuncu, ushizi we-cottage shizi, i-kefir, u-ayisikhilimu, iyogathi kanye nanoma yiliphi iphalishi yobisi.
Noma yiluphi uhlobo lwamafutha zemifino nezilwane: imajarini, ukhukhunathi kanye namafutha esundu.
Inyama enamafutha yezilwane (iwundlu, ingulube) futhi ikhiqizwe kuzo: amasoseji abilisiwe, isinqe, isando, ingulube ebilisiwe, amasoseji, amakhebha enyama, inyama enomhluzi nenyama ekheniwe.
Isikhumba nenyama ebomvu yenkukhu
Ukuhlukahluka okuhlukahlukene: ubuchopho, amaphaphu, izinso, isibindi (kufaka namathisela).
Isibindi, izinhlwayi zenyama, inyama eyi-sturgeon, igobolondo, umhluzi kanye nembaza.
Amaqanda nemayonnaise eyenziwe kubo.
Imikhiqizo yokubhaka ephezulu esezingeni eliphakeme nemikhiqizo ye-confectionery elungiselelwe kusetshenziswa amaqanda, ubisi noshukela.
Noma yiliphi i-pasta.
Ukudla okusheshayo: ama-fries ama-french, ama-hamburger, ama-popcorn, njll.
Ubhontshisi wekhofi, cocoa, ushokoledi.
Iziphuzo ezimnandi ze-carbonated nezidakwa.
Ukudla Okumele Kube yingxenye Yokudla Kwakho Kwansuku Zonke
Zonke izinhlobo zemifino efreshi eqandisiwe, efiselekayo ukuyisebenzisa nge-peel. Zingaphekwa, zidliwe futhi zithambe, zisetshenziswe ekuphekeni i-vinaigrette, isobho le-beetroot nezinye izitsha zemifino. Kunconywa ama-saladi ahlukahlukene kusuka kumifino emisha.
Okusanhlamvu, okusanhlamvu, isinkwa (okuthandwa kunikezwe isinkwa se-bran, rye kanye izolo).
Amakhambi kanye nemifino: ulethisi, ugalikhi wasendle, i-basil, i-sorrel, u-anyanisi oluhlaza kanye negalikhi, i-cilantro, iparsley ne-dill.
Ukugqoka: isoso soya, lwesinaphi, isoso, isobho le-tkemali, i-adjika.
Amafutha emifino: umnqumo, i-sunflower, ummbila, ugcotshwe, udlwenguliwe, u-soya.
Izinkukhu ezimhlophe ezingenasikhumba kanye nenyama ebusayo.
Ukudla kwasolwandle: inhlanzi yasolwandle, squid, kelp.
Amantongomane nezithelo ezomile.
I-Oatmeal iphekwe emanzini.
Okungafakiwe futhi kusaphuzwa namanje: ujusi, isiphuzo sezithelo, itiye namanzi.
Yonke eminye imikhiqizo ivunyelwe ukuthi idliwe, inciphisa ukudla kwayo izikhathi ezi-1-2 ngesonto. Isimo kuphela ukungadli ngokweqile.
Zokupheka okumnandi futhi enempilo
Ngokudla kwasekuseni ungapheka iphalishi elenziwa elayisi elinsundu. Ukuze wenze lokhu, ingxenye eyodwa yelayisi elinsundu ithululelwa izingxenye ezintathu zamanzi futhi iphekwe isigamu sehora. Iphothiji yokunambitha njengesitsha esisehlangothini inhlanzi noma inkukhu, noma ifomu elimnandi, linikezwe nge-1 ithisipuni loju.
Njengesidlo sasekuseni sesibili, ukunikela noma yisiphi isithelo esiphelele, noma ingilazi yobisi olunamafutha aphansi lapho kulunywa nabapheki belayisi.
Ukudla kwasemini, ungaziphatha engxenyeni ye-oatmeal enomhluzi obilisiwe, noma upheke isobho semifino eligcinwe ngamakhambi amakha.
Isidlakela santambama kufanele sikhanye. Kulesi sidlo, zonke izithelo ezifanayo, noma ingxenye yama-kefir aphansi, zizohamba kahle.
Isisekelo sokupheka okuningi kokudla okwehlisa i-lipid ngumsebenzi - ukunciphisa ukudliwa kwekhalori ngo-30% ukuze kuqinisekiswe ukulahlwa kwesisindo ngokweqile
Isidlo sakusihlwa esimnandi nesinempilo singalungiswa kusetshenziswa ama-squid abilisiwe noma inhlanzi yolwandle, ihlohlwe ngemifino eluhlaza emisha.
Unamathela ekudleni okufanele, imiphumela yomsebenzi ingabonakala ngemuva kwamasonto angama-3-4 - cishe uzokuthokozela isisindo esincishisiwe esinempilo enhle kakhulu.
I-cholesterol ngokwemvelo ikhiqizwa isibindi futhi inani layo lanele ukuhlinzeka ngezidingo eziyisisekelo, ngakho-ke ukunikezwa kwevolumu eyengeziwe yaleli khemikhali ngokudla nakho kuholela ekuwedluleni kwayo.
Umongo wokudla okwehlisa i-lipid ukuhlinzeka ngokudla okuhlose ukunciphisa ukwehla kwe-cholesterol egazini, ngakho-ke kusukela ekudleni kuzodingeka ungafaki:
Ama-carbohydrate akhanyayo ane-digestibility esheshayo.
Amafutha emvelaphi yesilwane.
I-cholesterol ngesimo sayo esihle kunazo zonke.
Kungani i-cholesterol ephezulu iyingozi?
I-cholesterol ephezulu kakhulu yinkinga enkulu engaholela emiphumeleni emibi elandelayo:
Ukunciphiswa kwemithambo yethambo lenhliziyo, okunomthelela ekuthuthukiseni i-angina pectoris.
Ukwephulwa kokuhlinzekelwa kwegazi emikhawulweni engezansi, okuholela ebuhlungwini emilenzeni ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba.
Ukuqhekeka kwemithambo yegazi.
I-coronary thrombosis kanye nokuthuthukiswa kokuhluleka kwenhliziyo okukuqina.
Ukwehla kwesikhumba, okuvezwe ngokubonakala kwamabala aphuzi, atholakala endaweni ikakhulukazi ebusweni.
Ukudla okwehlisa i-lipid uhlelo lokudla okunempilo olususelwa ekuqukweni kokudla okugcwele ama-carbohydrate, i-cholesterol namafutha ezilwane okulula ukukungenisa. Izazi zezempilo ziyincoma ukuthi inamathele kubantu abanezifo zenhliziyo, kanye nalabo abaphethwe yilezi zifo.
I-cholesterol inamafutha emvelweni. Kungokwesigaba sama-steroid akhiqizwa ngokuzimela amaseli womzimba womuntu. Uma i-cholesterol iyisilinganiso esifanele, kuyadingeka enkambweni ephumelelayo yenqubo ye-biochemical.
Izici eziningi ezilusizo zivela ku-cholesterol:
Ukubamba iqhaza ekwakhekeni kwengxenye ebalulekile njenge-Vitamin D3.
Ukukhiqizwa kwe-bile acid.
Ukuvikelwa kwamangqamuzana abomvu egazi ezinhlotsheni ezinobuthi be-hemolytic ubuthi.
Ukulawulwa kokuqalwa kwe-membrane yeseli.
Ukudla okwehlisa i-lipid kulungele kakhulu isigaba sezokwelapha, ngoba kususelwa ekusetshenzisweni kokudla okungenayo i-cholesterol eyingozi emzimbeni. Ngenxa yalokhu, ukudla okudla kunomthelela wokuphulukisa futhi ngasikhathi sinye kukuvumela ukuthi ukhiphe amakhilogremu amaningi.
Kuyini ukudla okwehlisa i-lipid
Ngaphansi kokudla okwehlisa i-lipid ekudleni komuntu, izinga lokusetshenziswa kwe-carbohydrate yokugaya kanye nezinto ze-cholesterol liyancishiswa. I-cholesterol eyingozi itholakala kakhulu ekudleni okuqukethe imicu yezitshalo kwifomu encibilikayo futhi engancibilikisi, kanye namafutha angama-mono- ne-polyunsaturated.
Njengoba wazi, i-cholesterol embi ifakwa odongeni lwemithambo yegazi, yakhe izingqwembe ze-atherosclerotic. Ngenxa yazo, ukugeleza kwegazi kuyaphazamiseka, kanye nokubanga kwegazi, kwakheka imithambo ye-varicose.
Kepha okubi kakhulu yisifo senhliziyo (unhlangothi, ukushaya kwenhliziyo, njll.). I-cholesterol ephakanyisiwe inethonya elibi enkambweni yesifo sikashukela. Kulokhu, lokhu kudla kwe-hypolipidemic kukhonjelwe ukuphazamiseka okuningi kwe-pathological.
Funda kabanzi ngokudla okukhonjiswe i-cholesterol ephezulu.
Ukusebenza kahle Nemiphumela Yokudla
Ukudla okwehlisa i-lipid akuhloselwe ukushiswa okusheshayo kwamafutha, kepha kusebenza kakhulu kumphumela ohlala njalo. Ngakho-ke, ezinsukwini ezingama-30 ungalahlekelwa kusuka ku-2 kuya ku-8 kg wesisindo, kepha umphumela uzohlala isikhathi eside.
Uma unamathela kuye izinyanga ezimbili, umzimba wakho uzojwayela ukusetshenziswa okungaphansi kwemikhiqizo eyingozi. Ngenxa yalokhu, isisindo sizokwehla ngisho nangokwengeziwe. Ngemuva kwakho konke, ngeke udle izingxenye ezinkulu zezitsha.
Izici ezinhle zokudla okwehlisa i-lipid:
Ukuqanjwa kabusha kwezigcweti ze-atherosclerotic,
ukushesha kokujikeleza kwegazi,
ukugcwala komzimba ngezinto eziwusizo,
Ukuqedwa kwezinto eziyingozi emzimbeni,
Ukudla okwehlisa i-lipid akuyona impoqo, kepha kubhekwa kunconyiwe, ngoba kulinganiselwe. Uma wakhela ukudla kwakho kwansuku zonke ngesisekelo sawo, ungasusa izinkinga eziningi zempilo.
Izimiso nemithetho yokudla
Noma yikuphi ukwelashwa kokudla kuphelele ukwehluleka, uma ungalandeli imithetho ethile. Ukudla okwehlisa i-lipid nakho kunemigomo yazo:
Kwenqatshelwe ngokuqinile ukuhlela izinsuku zokuzila ngokuya ngohlobo lokuzila, njengezifo eziningi, futhi ikakhulukazi uhlobo lwesifo sikashukela, lokhu kuphikisiwe.
Udinga ukudla imithamo emincane.
Ukudla okukodwa kufanele kuqukethe amaprotheni, ama-carbohydrate namafutha ngokulinganisela.
Ukudla kumele kube okuthambile. Isibonelo, kuthiwa kufanele idle amagremu ayi-150 enyama ngosuku, okusho ukuthi lo muthi kufanele uhlukaniswe ngemithamo emi-5.
Kuzofanele ubale amakhalori adliwe nsuku zonke.
Okuqukethwe kwekhalori kwansuku zonke okuphezulu akufanele kudlule i-1200 kcal.
Kwenqatshelwe ukwephula uhlelo lokudla okunempilo.
Ukudla kufanele kwehlukaniswe okungenani ekudleni okuyi-5.
Awusoze uthathwe yimilutha.
Isikhathi esiphakathi kokudla kufanele sibe ngamahora ama-2-4. Kepha isikhathi sokukhula ebusuku sikhuphuke saba amahora angama-10.
Isidlo sokugcina kufanele okungenani sibe amahora angama-2-2 ngaphambi kokulala.
Uma ungazange ubambe iqhaza kwezemidlalo, manje udinga ukukhuthala futhi unake isimo sakho somzimba.
Kuyinto engathandeki ukubhema. Lokhu kubambezela imetabolism.
Kwezinye izimo, udokotela angakunquma ukudla okuphezulu kwekhalori kwansuku zonke kune-1200 kcal. Iqiniso ngukuthi, ngokwesibonelo, ngesifo sikashukela kunconywa ukudla ukudla okuningi. Ngaphandle kwalokho, kuzolimaza umzimba. Ngakho-ke, akufanele uphikisane nezincomo zikadokotela ezinjalo.
Imiphi imikhiqizo okufanele ilahlwe
Ukubhaka okubhakiwe, namakhekhe, amakhekhe, ama-muffin, amakhukhi nokunye.
Amazambane - othosiwe, ama-fries, ama-chip.
Amaswidi, u-ayisikhilimu, njll.
Ushukela, ujamu, ujamu, kuyalondolozeka.
Imikhiqizo yobisi enokuqukethwe okunamafutha amaningi, ukhilimu wobisi, ubisi oluhlanganisiwe.
Ingxenye enamafutha yenkukhu nenyama enamafutha ngokuvamile.
Amasoseji aluhlaza futhi obhemayo, ubhekeni, isinqumelo.
Ukudla okusheshayo, ipitsa.
Ezinye izinhlanzi ne-caviar.
Ukudla kwasolwandle: ama-lobster, ama-squid, ama-cuttlefish, ama-oysters, ama-shrimp kanye nolunye u-shellfish.
Ukhukhamba ongamisiwe, ikakhulukazi osuselwa kuviniga, ubheme inyama.
Amafutha namafutha omsuka wesilwane.
Offal: isibindi, inhliziyo, izinso.
Ikhofi eqinile noma itiye.
I-Alcohol (kufaka phakathi iziphuzo eziphansi zotshwala).
Umhluzi onamafutha nenyama enamafutha.
Izinongo ezinamakha ngokweqile.
Uhlu lwemikhiqizo evunyelwe
Isinkwa: ukolweni ngesimo se-crackers, okusanhlamvu okuphelele, i-rye.
Izithelo nemifino okusha, okuphekwe futhi kubhakwe.
Amakhekhe: i-oatmeal, ilayisi elinsundu, ubhontshisi, uphizi, soya.
Amantongomane: amantongomane, imbewu yesame, imbewu yothelilanga.
Izinhlanzi ezinamafutha (ine-omega-3s eyehlisa i-cholesterol).
I-sunflower namafutha omnqumo.
Iwayini elibomvu ngokulinganisela.
Inyama enamafutha aphansi - inkukhu, i-veal, inyama yomvundla, inyama yenkomo, izigwaca, iturkey.
Imikhiqizo ye-Sour-milk skim.
Ukudla okwehlisa i-lipid kuhlanganisa ukudla okuyi-5 ngosuku. Nsuku zonke udinga ukudla inani elithile lokudla okungafani. Futhi qiniseka ukuthi unamathela kuzo zonke izidingo nezidingo. Kungale ndlela kuphela lapho uzokwazi ukuthola imiphumela ephezulu.
Ukudla kwasekuseni kokuqala kufaka i-oatmeal ebilisiwe (njalo phezu kwamanzi) kanye nengilazi yetiye eliluhlaza.
Kwasemini, ungadla isaladi yezithelo ne-berry (izithelo uma ufisa, kepha ukhalori ongaphansi), enesisindo esingu-250 amagremu.
Kudla isidlo sasemini, yidla iphalishi yelayisi (g g), upelepele ogcotshwe ngemifino (100 g inani) nejusi le-apula.
Ukuze uthole isidlo sasemini sakusasa, nikeza ukukhetha ku-1 pearl ne-crouton yesinkwa.
Ngesidlo sakusihlwa, pheka i-borsch yemifino.
Ekuseni, yidla isaladi yemifino enamafutha omnqumo (amagremu angama-250) uphuze itiye elimnyama.
Kudla kwasemini, zenzele iplamu nogilebhisi.
Ukudla kwasemini, pheka i-fillet yenkukhu ne-porridge ye-buckwheat. Ukuphaka akufanele kube nesisindo esingaphezu kwama-200 amagremu. Yenza peach entsha.
Ukuze uthole ukudla okulula, yidla izithelo ezomisiwe (250 g).
Ngokudla kwakusihlwa, bhaka izinhlanzi ezinamafutha bese wenza isaladi yemifino. Udinga ukuphuza amaminerali namanje amanzi.
Ngemuva kokuvuka, zinakekele engxenyeni ethile (amagremu angama-250) koshizi ongenamafutha futhi uphuze ubhontshisi wekhofi ongenashukela.
Ukudla kwasemini, yidla umango nezinye izithelo, phuza itiye eliluhlaza.
Kwisidlo sasemini, yenza isobho kuphela kusuka kwimifino (ingxenye engama-300 g), bese uzivumela ukuthi udle izingcezu ezi-2 zesinkwa rye.
Ntambama, phuza ingilazi yamanzi angenamaminerali ngaphandle kwegesi futhi udle isaladi yamaGreek.
Isidlo sakusihlwa - inyama yenkomo ebilisiwe nemifino ethosiwe. Isitsha esiphelele sama-gramu ayi-400. Ungaphuza amanzi amaminerali.
Ukudla kwasekuseni, lungiselela ingxenye ejwayelekile yephalishi yelayisi elinsundu, uphuze umango wemango.
Ukudla kwasemini, vumela ama-crackers ambalwa ne-1 orange.
Ukudla kwasemini, lungisa i-borsch yemifino, uphuze inkomishi yetiye elimnyama.
Emini - isaladi enamanzi olwandle.
Kusihlwa - ujusi ne-oatmeal.
Ukudla kwasekuseni, pheka u-millet porridge bese uphuza itiye eliluhlaza.
Ngokudla kwasemini, yenza ujusi wemvelo bese udla ama-tangerine ambalwa.
Kwasemini, i-borscht yemifino futhi, kodwa ngokungezelelwa kwenani elincane lenyama yenkomo egayiwe, itiye elimnyama.
Isidlo sasemini ntambama sihlanganisa isaladi yezithelo ne-berry.
Ukudla kwakusihlwa - inhlanzi enamafutha enamafutha, ingilazi yamanzi amaminerali.
Ukudla kwasekuseni, pheka iphalishi le-buckwheat emanzini (amagremu angama-200) bese uphuza inkomishi yetiye eliluhlaza.
Ukudla kwasekuseni kwesibili, lungisa isaladi yasolwandle kanye nanoma yiluphi ujusi wemvelo.
Kusihlwa, pheka isobho le-mushroom nenhlanzi, phuza amanzi amaminerali.
Brew itiye eliluhlaza okwesibiliboco sasemini, engeza isipuni soju kulo. Thela i-apula eli-1 (mhlawumbe eliluhlaza).
Ukudla kwakusihlwa kufaka amazambane abilisiwe nesaladi yemifino, ujusi wemvelo (onke amagremu angama-250 ngalinye).
Ngokudla kwasekuseni, uzodinga ikhofi esheshayo ne-oatmeal.
Ukudla kwasekuseni kwesibili - itiye eliluhlaza, izithandani ezimbalwa.
Kwasemini, pheka isobho leklabishi laseRussia ngenkukhu, phuza amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi.
Ukuze uthole isidlo sasemini, nika i-kefir (okunamafutha aphezulu ngo-1.5%) namantongomane.
Ngokudla kwakusihlwa, imifino ebilayo kanye nosiphuzo ujusi.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukuba khona kwe-cholesterol egazini kuyinto engathandeki, okuholela ezinkingeni zokukhuluphala kanye nokukhula kwezifo zenhliziyo. Eqinisweni, i-cholesterol yinto etholakala kabusha emzimbeni womuntu ngesikhathi sokudla, esetshenziselwa ukondleka kanye nokusebenza kokusebenza kwamahomoni amaningi. Ngobuningi obuthile, i-cholesterol ibalulekile, kepha lapho iqongelela emzimbeni ngokweqile, khona-ke izinkinga ziqala. Isixazululo esisodwa senkinga ukudla okunciphisa i-lipid.
Ukunyuka kwe-cholesterol yegazi kulula kakhulu - kungukudla okungenampilo kanye nokudla ngokweqile kukholi ngayinye. Ukudla okusheshayo, okunamanani amaningi wekhalori, kuthinta ikakhulukazi ukwanda kwe-cholesterol yegazi. Imiphumela yokudla okunjalo iyona engathandeki kakhulu futhi ivelele ikakhulukazi ngesimo sokubonakala kwamaphawundi angeziwe, bese kuthi-ke ukubonakaliswa kwezifo ezinjengokuhlaselwa yisifo senhliziyo ne-ischemia. Kulesi sihloko, sizothola ukuthi sinwehlisela kanjani izinga le-cholesterol egazini ukuze lisuse futhi lisuse amakhilogremu esisindo esengeziwe, kepha okwamanje, thola ukuthi iyiphi ingozi ye-cholesterol.
Ukudla okwehlisa i-lipid kuwukudla okukhethekile okubandakanya ukudla okuthile okungathinta kahle inqubo yokunciphisa i-cholesterol egazini. Ukudla okunjalo akusizi hhayi kuphela nge-cholesterol enkulu ngokweqile kanye ne-cholesterol ephezulu, kodwa futhi empilweni yansuku zonke, uma umuntu enesifiso sokuphila impilo ende futhi enempilo.
Ukudla okuvunyelwe kokunciphisa okwehlisa i-lipid kufaka phakathi:
izithelo namajikijolo, angadliwa amasha futhi aphekwe,
imifino, engadliwa futhi emisha nasesitsheni noma epanini,
izinhlanzi ikakhulu ezivela emanzini asolwandle, aqukethe inani elilinganiselwe lamafutha,
inyama yezilwane enjengokuthi: unogwaja, i-veal, i-turkey, inkukhu,
i-sunflower noma i-olive olive,
Lolu hlu oluphambili lwemikhiqizo oluyingxenye yokudla okwehlisa i-lipid. Iziphuzo, kufanele futhi unake kuphela iziphuzo ezisanda kufakwa, iziphuzo zezithelo, amaminerali angenawo amagesi, kanye netiye nekhofi ngaphandle koshukela. Ukusetshenziswa kotshwala akuvunyelwe ngokuphelele, kepha ngaphezulu kulokhu esigabeni esilandelayo.
Uhlu lwemikhiqizo oluvinjelwe
Akuvumelekile ngokwezigaba ukusebenzisa ukudla okuqukethe amafutha emvelaphi ehlukahlukene ngokweqile.Amafutha yizinto eziphambili ezinomphumela ongemuhle hhayi ephepheni lesisu somuntu kuphela, kodwa nakuwo wonke umzimba. Ngakho-ke, noma ekudleni komuntu ophile kahle ongakhuluphele futhi ophakeme ku-cholesterol yegazi, inani lamafutha adliwayo kufanele libe lincane.
Imikhiqizo engavunyelwe ngaphansi kokudla okwehlisa i-lipid ifaka:
inyama yezilwane ezinjengezingulube, amadada, amahansi,
amaswidi: amaswidi, ushokoledi, ushukela, uju,
imikhiqizo kafulawa, isinkwa esimhlophe nezimpawu zawo,
imikhiqizo yobisi engafisi,
Ukudla kwasolwandle: imifantu, crayfish, shrimp,
imayonnaise, ketchup kanye imajarini,
amaqanda nemikhiqizo eseqedile,
Kuyenqatshelwe futhi ukusebenzisa amanzi amnandi akhazimulayo, iziphuzo zemvelaphi engeyona eyemvelo, kanye notshwala nganoma yiluphi uhlobo futhi ngezinga elihlukile. Yonke le mikhiqizo ayifakwa kuhlu lwayo ewusizo ngenxa yomthelela omubi ikakhulu esibindini somuntu, kanye nasendleleni yokugaya ukudla kanye nawo wonke umzimba. Ngakho-ke, kufanele zikhishwe ngokushesha ekudleni, uma uthatha isinqumo sokuguqula impilo yakho ngokwejwayelekile futhi wehlise isisindo.
Ukudla okwehlisa i-lipid kunendlela ekhethekile yokudla ukudla, ikakhulukazi, kufanele wazi ukuthi yisiphi isikhathi okudingeka usidle ukuze uzuze umphumela omuhle.
Ukudla kwasekuseni akumele kube ngaphambi kuka-9 ekuseni, futhi kungcono ukuba nesidlo sasekuseni ngo-8 ekuseni. Lesi sikhathi sekulungile ukuthi kungenzeka ukuthi kususwe i-cholesterol emzimbeni. I-oatmeal eyenziwe muva nje iyindlela engcono yokubhekana nenqubo yokususa i-cholesterol emzimbeni.
Ukudla okulandelayo kuphakathi kwamahora ayi-12,00 no-13,00. Ukudla kwasemini, ukudla okungcono kakhulu okwengeza amandla yilezi: isobho zemifino, umhluzi, ukudla kwamaprotheni kanye nemifino emisha.
Phakathi kokudla kwasekuseni nelantshi ngesikhathi esingamahora ayi-11.00 kuvunyelwe ukudla i-apula eyodwa noma esinye isithelo. Isimo esifanayo sinesidla phakathi kokudla kwasemini nesidlo sasebusuku. Ukudla okulula kungabi cishe ngo-16,00, futhi futhi ungadla imifino noma izithelo.
Ukudla kwakusihlwa akudingeki ngaphambi kwamahora ayi-19,00. Kufanele iqukethe amasaladi ngamafutha zemifino, aqukethe i-fiber. Esidlweni sakusihlwa, ukusetshenziswa kwe-kefir enamafutha aphansi noma i-yogurt nakho kuvunyelwe.
Ukudla ngaphambi kuka-19,00 akunconywa, ngoba konke ukudla okudliwe nakanjani kuzobekwa ngendlela yamakhalori ngokweqile.
Ukusebenza kwalolu hlobo lokudla kubonakala ngemuva kwenyanga yokuqala. Okokuqala, izinga le-cholesterol egazini liyancipha, njengoba kuqinisekiswa udokotela ngemuva kokuphumelela izivivinyo. Usuvele enyangeni eyodwa yokudla okunjalo ungabona ukunciphisa umzimba kusuka ku-2 kuye ku-5 kg. Ngaphezu kwakho konke lokhu, ngemuva kwesonto lokudla okwehlisa i-lipid, umuntu uzozizwa engcono kakhulu futhi asebenze ngokwengeziwe. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, isifiso sokugcwalisa isisu sizonyamalala ngokuphelele, okubandakanya ukwehla kwesisindo somzimba ngamanani amakhulu kakhulu.
Ukuze uzuze umphumela omuhle kakhulu wokuncipha kwesisindo, udinga ukunaka umsebenzi wokuzivocavoca umzimba kanye nesimo sempilo esisebenzayo. Kuyadingeka ukuqeda umkhuba omubi wokubhema, obambezela imetabolism nokuqedwa kobuthi emzimbeni.
Ukudla okwehlisa i-lipid akuyona impoqo empilweni, kepha uma unezinkinga ngesisindo ngokweqile ne-cholesterol ephezulu egazini, khona-ke kungcono ukwakha ukudla kwakho emikhiqizweni enjalo futhi unamathele ekudleni okufanele. Ngezikhathi ezithile, kuyadingeka ukuhlola izinga le-cholesterol nokuvikela ukwanda kwalo.
Ungadla kanjani ngemuva kokudla
Ukudla okwehlisa i-lipid okungenani izinyanga ezimbili ubudala. Kepha uma kuthathwa isikhathi eside ukwamukelwa kwemikhiqizo engenhla, umphumela omuhle uyoba njalo. Ngaphezu kwalokho, umphumela ngeke uthinte kuphela ukwehla okukhulu kwesisindo somzimba, kodwa futhi nenhlala-kahle.Ikakhulu, ungabona ukuthuthuka ekusebenzeni kwenhliziyo, umsebenzi owandisiwe, ukwanda okukhulu kwesimo semoya. Ukungatholakali kokuvaleka ezitsheni kuzoholela ekuhambeni kwegazi okuthuthukile, okusho ukuthi isifiso sokulala komuntu nokulala kwakhe kuzothuthuka. Kepha uma, ngemuva kwezinyanga ezi-2 zokulandela lokho kudla, umuntu ubuyela ekudleni kwangaphambilini, khona-ke yonke imiphumela etholakele izokwenziwa ize.
Kubalulekile kumuntu onenkinga yenhliziyo ukuthi angagcini i-cholesterol yegazi kuphela, kodwa futhi nokudla ukudla okunezivikelo ezidingekayo kuphela ekusebenzeni nasekuhlinzekeni izitho eziningi. Kepha lokhu akusho nakancane ukuthi noma ngemuva kokuqedwa kokudla, ukubambelela ngokuqinile ekudleni okuthuthukile kufanele kuqhubeke. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukukhokha isiliphu samaswidi noma uzenzele inyama eyosiwe. Kepha kubalulekile ukuqapha inani nokuvama kwalokhu kuphazamiseka kokudla, ngoba kancane kancane bangakhula babe ekuzondleni okungahlosiwe.
Ngemuva kokuqeda ukudla okwehlisa i-lipid, ukudla komuntu kungahle kube nezilinganiso ezilandelayo:
I-15-20% yimikhiqizo evela ohlwini lwabenqatshelwe
I-80-85% - imikhiqizo evela kuhlu evunyelwe.
Kungale ndlela kuphela lapho uzokwazi ukufeza umphumela omuhle, oboniswe kungabikho kokukhuphuka kwe-cholesterol yegazi nokuqaliswa kabusha kohlelo "lokuthola isisindo". Ngakho-ke, ukudla akuyona nje into esemqoka yokulahlekelwa isisindo, kodwa futhi nokwenza impilo kahle kanye nokuqinisa amasosha omzimba. Ukudla isikhathi eside kwe-hypolipidemic kwenzeka, umphumela ongcono ungalindelwa ekugcineni. Ngokuphathelene nesikhathi sokudla, lapha awukwazi ukukwenza ngaphandle kombono we-yokudla.
Ukudla okwehlisa i-lipid kuwukudla okwakhelwe ukwehlisa i-cholesterol yegazi futhi ngenxa yalokho kuholela ekulahlekelweni kwesisindo. Lokhu kudla kunempilo, ngakho-ke, kuqeda indlala. Ngokuphambene nalokho, udinga ukudla okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku, ungafaki ukudla okunothe i-cholesterol, ama-carbohydrate alula namafutha ezilwane (hhayi ngokuphelele) ekudleni.
Umongo wokudla ukunciphisa inani lokulimaza esikhathini esithile sesikhathi. Akufanele uthembele emiphumeleni esheshayo, ngoba inhloso akuyona ukwehlisa isisindo, okungukuthi, ukuthuthukisa impilo yakho. Lokhu kuzothatha okungenani izinyanga ezi-3-4. Ngalesi sikhathi, inhlala-kahle iyothuthuka kakhulu futhi, ngenxa yalokho, kuzothatha cishe ama-5-8 kg.
Noma kunjalo, kufanele udle. Kugcizelelwa okusanhlamvu, okusanhlamvu, izithelo, imifino, isinkwa se-rye, namagamu.
Akudingekile ukwenqaba ngokuphelele inyama. Kungcono ukufaka ingulube enamafutha ngenkomo noma inkukhu ngaphandle kwesikhumba. Amafutha kusuka kwezingcezu adinga ukunqunywa.
Okufanayo kuhamba nangamafutha. Ukwenqatshwa ngokuphelele kwamafutha kugcwele imiphumela, ngakho-ke uwoyela wemifino kufanele ube khona ekudleni.
Imithetho eyisisekelo ayihlukile kakhulu kokunye ukudla. Lokhu, eqinisweni, kungukudla okufanayo kokudla, kepha ngokukhawulelwa okwengeziwe kokudla okugcwele i-cholesterol (ibhotela, isaladi, izikhupha zamaqanda, imikhiqizo yobisi, ushizi, amafutha, amasosi abhemayo kanye naphukile.
Okungenani ukudla okungu-5 ngosuku izingxenye ezincane (yebo 200-250 gr).
Ukudla kokugcina amahora ama-3 ngaphambi kokulala.
Amafutha, okuthosiwe, okushiswa kanye nokwenziwa isinkwa kufanele kungafakwa ngaphandle, futhi okuthandwayo kufanele kunikezwe ezitsheni ezibilisiwe, ezinosiwe nezinziwe.
Inani eliphezulu lama-kilojoule yi-1200-1300 kcal ngosuku.
Ama-fluid kufanele okungenani abe ngu-1.5-2 amalitha ngosuku.
Kuyalulekwa ukufaka esikhundleni ushukela noju.
Khawulela umthamo wosawoti.
Lapho udla amaqanda, khetha amaprotheni kuphela.
Ukuntuleka kwamaprotheni ezilwane kungasuswa ngemifino (i-legumes).
Ukukhawulela isinkwa, kodwa ungasifaki, kungcono ku-rye izolo.
Ngokokuqala ngqa (ukudla okuningana, futhi kwezinye izikhathi impilo yonke), ukwenza kube lula ukukhetha imikhiqizo efanele, ungasebenzisa itafula.
Imithetho eyisisekelo kanye nemigomo kuyafana ekudleni okwejwayelekile kwe-lipid-ukwehlisa, ngomehluko othile:
Usawoti kufanele ugcinwe ubuncane.
Amanzi kufanele futhi akhawulelwe kumalitha ayi-1,2 ngosuku.
Amazambane avumelekile, uju, imikhiqizo yobisi.
Isipayisi, izitsha ezi-spice, i-legumes, i-sauerkraut zinqatshelwe.
Ukudla kwe-Hyperlipidemic low-carb
Lokhu kudla, ngaphezu kokuxazulula izinkinga zempilo, kukusiza ukuba wehlise isisindo ngokufanele.
Ngokungeziwe ezimisweni eziyisisekelo zokudla okujwayelekile, kufanele:
Umkhawulo ku-1000-1200 kcal ngosuku.
Ukuphuza okungenani amalitha ayi-2,5 amanzi ahlanzekile ngosuku, ngenkathi ukuphuza uketshezi ngokudla kungavunyelwe, ikhefu elincanyana ngaphambi nangemva kokudla liyimizuzu engama-30-60.
Nikeza ukukhetha emifino enekhalori ephansi: iklabishi, ukhukhamba, utamatisi.
Ungadli i-pasta, amazambane, ubhanana, amagilebhisi nezinye izithelo ezimnandi, kanye namajikijolo.
Noma yikuphi okunye kokudla okungenhla kuvunyelwe ngabezokudla futhi bangene esimweni sezokwelapha. Ngenxa yohlu olubanzi lokudla okuvunyelwe, ungadla okuhlukahlukene. Into esemqoka ukuthi akukho muzwa wendlala, ngoba kwenqatshelwe ukulamba. Ungakwazi ukunamathela ekudleni impilo yakho yonke, uyihumushele esimweni sokuphila, ngenkathi unciphisa isisindo futhi uthuthukise impilo. Kodwa-ke, ezinye ze-contraindication nemiphumela emibi nayo ikhona.